Koorsooyinka - Naqshadeynta 3D - Geofumadas
Koorsooyinka - Naqshadeynta 3D
Naqshadeynta Naqshadeynta AulaGEO waxay soo bandhigaysaa koorsada qaabeynta 3D ee Sketchup, waa aalad lagu fekero dhammaan qaababka qaabdhismeedka ee ka jira aag. Intaas waxaa sii dheer, astaamahan iyo qaababkan waa kuwo jaangooyooyin lagu dhejin karo laguna dhigi karo Google Earth. Koorsadan, waxay awoodi doonaan inay bartaan fikradaha aasaasiga ah ee sawirka iyo qaabka 3D ee ...
Abuur moodello dijitaal ah oo sawirro ah, softiweer bilaash ah iyo Recap Koorsadan waxaad ku baran doontaa inaad abuurto oo aad la fal gasho moodellada dhijitaalka ah. Abuur qaababka 3D adoo adeegsanaya sawirro, sida farsamada sawir-qaadaha aan duuliyaha lahayn. -U isticmaal softiweer bilaash ah 'About3D' iyo 'MeshLab' -Ku samee adoo adeegsanaya AutoDesk Recap, -Ha ku isticmaal Bentley ContextCapture,
Koorsooyinka - Naqshadeynta 3D Koorsooyinka - LandWorks Koorsooyinka AutoDesk Recap